Germany Oo Portuqal Ku Kala Jartay Isla Garoonkii Spain Lagu Xasuuqay
HomeWararka MaantaGermany Oo Portuqal Ku Kala Jartay Isla Garoonkii Spain Lagu Xasuuqay
Saddex gool oo uu shabaqa dhigay weeraryahanka naadiga Bayern Munich iyo xulka Germany ee Thomas Mueller iyo gool uu u dhaliyey laacibka difaaca ee Mats Hummels ayaa u suurto galisay xulka qaranka Germany inuu dhulka la dhaco oo laba cad u kala gooyo qaranka Portaqiiska kagana adkaaday 4-0.
Uma Malaynayo in mushkiladu garoonka tahay, laakiin waa nasiib , in garoonkii Spain 5-1 loogu dhiibay ee ay ugu xambaarisay Holand, hadana markale tii tu lamid ah lagu bado Portuqal oo ay kala kulmaan Germany.
Ciyaartii xiisaha badnayd, aadkana loo wada sugayay ee Germalka iyo Portaqiiska ku dhex maraysay garoonka Arena Fonte Nova ee magaalada Salvador ayaa ku dhamaatay natiijo aan la filayn iyo bidaari sibiq bay kugu gashaa, kadib markii Germany 4-0 gosha u gelisay Portuqal oo xataa Ronaldo ka dhex muuqdo.
Portugal qaybtii hore ee ciyaarta oo ahayd wakhti Pepe kaadh ka casaanka u qaatay kadib markii uu madaxa ka hidheeyey Muller oo dhulka fadhiya , isla markaana la dhacay suxulkii uu marka horeba wejiga kaga dhuftay , talaabadaas oo muujisay arxan daro iyo akhlaaq xumo dhab ah oo difaac yahayn Pepe ku kacay, waxay ku dhamaatay 3-0 ay ku hogaaminayeen Germany.
Isu soo noqodkiina , waxaa muuqatay dib u deg uu sameeyey xulka Germalku, taas oo uu saamaxday Portugal inay woxogaa horumar ah ka sameeyaan xaga kubad haysashada iyo weerarkaba , laakiin goolkii 4 aad oo uu ka dhaliyey xidigii ciyaarta ee caawa Muller ayaa iyana ahayd mid sii laban laabta, niyad jabka Ronaldo iyo xulafadiisa oo habeen madow ay u ahayd caawa.
Ciyaartuna waxay ku dhamaatay 4-0 ay guushu ku raacday Germany, taas oo ah fariin culus oo uu xulka tababare Low u diray qaramada hungurigu kaga jiro , qaadista koobka aduunka ah.
Taageereyaasha Man City Oo Dalbaday garoon Madhan Kulanka Dynamo Kiev
Iker Casillas Iyo Cristiano Ronaldo Oo Maanta Laga Sugayo Inay Ka Tagaan Real Madrid
14/05/2015 Abdiwahab Ahmed
Arjen Robben Oo Raaligallin Ka Bixiyey Rigoodhihii Guusha U Horseeday Holland